ROSA Image Writer - ISO ပုံများ USB ကိုကူးရေးရန်ရိုးရှင်းတဲ့မန်နေဂျာ Linux မှ
ROSA Image Writer - ISO ပုံရိပ်များကို USB သို့ကူးရေးရန်ရိုးရှင်းသောမန်နေဂျာ
၏စကွဝာ၌ GNU / Linux application များ အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများ၊ ကိရိယာများအရ၊ USB ပုံရိပ်များကို ISO image ဖိုင်များကူးရေးရန်မန်နေဂျာများ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာလူသိနည်းတဲ့ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရဲ့အလှည့်ပါ ရိုစာပုံစာရေးဆရာ.
ရိုစာပုံစာရေးဆရာ သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရုရှားအုပ်စုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းက ဖန်တီး၍ ဖြန့်ဝေသည် ရုရှားသူလည်းသူ့ကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ် GNU / Linux Distro ခေါ်ဆိုခ ROSA ဒက်စ်တော့။ အဘယ်ကြောင့်, ဒါကြောင့်အထူးသအပြင်, ရိုးရှင်းစွာနှင့်တိုက်ရိုက်အမျိုးမျိုးသောမှတ်တမ်းတင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ISO ဖိုင်များ တစ်ဦးအတွက် USB driveပြောခဲ့သည့်ရုရှား Distro ၏ ISO ဖိုင်များကိုထိထိရောက်ရောက်နှင့်ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ပါ။
သတိပြုသင့်သည်မှာ၎င်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဗဟုသုတနည်းပါးသောသူများကဆိုသည် GNU / Linux Distro ရုရှား ROSA ဒက်စ်တော့ ၎င်းသည် GNU / Linux ကမ္ဘာ၏ဝါသနာရှင်များအတွက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လက်ရှိအတွက်ဖြစ်သည် ROSA Desktop ကိုလတ်ဆတ်သော R10။ ဗားရှင်းကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဒုတိယလွှတ်ပေးရန်အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည် ပန်းရောင် platform2016.1၎င်း၏အနေဖြင့် ၂ နှစ်စံပံ့ပိုးမှုနှင့် ၂ နှစ်တာပံ့ပိုးမှုတိုးမြှင့်ထားခြင်းခံရပြီး၎င်း၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများကို ၂၀၂၀ အကုန်အထိပေးလိမ့်မည်ဟု၎င်း၏ developer များကပြောကြားခဲ့သည်။
အခုအတွက်တော့, ROSA Desktop ကိုလတ်ဆတ်သော R10 ၎င်းတွင် Plasma 5, KDE4တရားဝင် desktop ပတ် ၀ န်းကျင်နှစ်ခုနှင့် community support (LXQt, Gnome 3) ပါ ၀ င်သော desktop environment နှစ်ခုရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ GNU / Linux Distro အောက်ပါစာမျက်နှာ၏တရားဝင် link ကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် link ကို သူ၏ဝီကီမှသို့မဟုတ်ရုရှား Linux ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီမှဤသူကိုခေါ်ခဲ့သည် LLC NTC အိုင်တီ ROSA.
1 ROSA ပုံစာရေးဆရာ
ဤဆောင်းပါး၌လေ့လာနေသောကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ROSA ပုံစာရေးဆရာ နှင့်သင့်အညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, အတူတူ:
၎င်းသည်နောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်းတွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည် ROSA Desktop ကိုလတ်ဆတ်သော R10
အခြားထဲမှာ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များအပြင် Windows နှင့် Mac OS Xအောက်ပါအရွယ်အစားနဲ့ binary files (executables) ကိုအသုံးပြုခြင်း။
Windows ကို (၈ Mb)
Linux 32-bit (၈ Mb)
Linux 64-bit (၈ Mb)
Mac OS X ကို (၈ Mb)
၎င်း၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုအောက်ပါအတွက်သုံးစွဲနိုင်သည် ABF repository ကို.
လိုပဲ MX-Linux Distro နှင့်၎င်း၏မူလလျှောက်လွှာ (ကိုယ်ပိုင်) "MX Build Live-USB" (MX Live USB ထုတ်လုပ်သူ) အောင်မြင်စွာမှတ်တမ်းတင်ခံရဖို့ USB drive, အ Distro ROSA Desktop ကို ၎င်းသည်သီးခြားဖွဲ့စည်းမှုရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထူးအပလီကေးရှင်းလိုအပ်သည်။
ဆိုလိုတာက ROSA ဒက်စ်တော့ ခေါင်းစီးများပါရှိသည် ISO ပုံရိပ်တွေhard drive များနှင့် flash drives များအတွက်အသုံးပြုသော boot record များရှိ partition table များအပြင် ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင် application ကို၎င်းတွင်သာရေးသားရန်လိုအပ်သည် နည်းနည်း flash disk ကို မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲ ISO ဖိုင်ကို။ ရုံရှိလျှင်သကဲ့သို့ GNU / Linux Distro ခေါ် standard command line tool ကို "Dd"။ ဒီကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းဟာမှားယွင်းတဲ့ disk ကို overwrite လုပ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သတိများစွာလိုအပ်သည်။
ဒီ tool ၏ developer များကမူ၎င်းပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြကြသည် GNU / Linux Distro အသုံးပြုသူကရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကန့်သတ်, သောဖိုင်များဟုပြောသည်လျှင် ISO ပုံရိပ်တွေ အချို့သော GNU / Linux Distros များကိုစာဖြင့်ရေးသားနိုင်သည် flash disk (USB drive) ကိုသုံးနိုင်သည် command "dd" သို့မဟုတ် bitwise ကော်ပီလုပ်သောအခြားအလားတူကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ROSA ပုံစာရေးဆရာ အဲဒါကိုအတူတူလုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဆန့်ကျင်ပေါ်, ဖိုင်တွေကဆိုပါတယ်လျှင် ISO ပုံရိပ်တွေ ပိုမိုသောအဆင့်မြင့်သောကိရိယာများလိုအပ်သည်။ Flash disk ကိုခွဲခြားခြင်း၊ ပုံစံချခြင်း၊ ဖိုင်များကိုအခြားအထူးလုပ်ငန်းစဉ်များအကြားဖိုင်တွဲများအဖြစ်ကူးယူခြင်း၊ ROSA ပုံစာရေးဆရာ အဲဒါကအကူအညီမဖြစ်နိူင်ဘူး။
ဒီinရိယာရှိအခြားအသုံးဝင်သောကိရိယာများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်လာမည့် post ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုပါသည်။
USB စက်များပေါ်တွင် disc ပုံများကူးယူခြင်းအတွက်မန်နေဂျာများ
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ခေါ်ဒီ flashy နည်းနည်း app အကြောင်း «ROSA Image Writer», ကျွန်တော်တို့ကိုအလွယ်တကူနှင့်တိုက်ရိုက်အမျိုးမျိုးသောမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ် ISO ဖိုင်များ တစ်ဦးအတွက် USB driveအထူးသဖြင့်သောသူတို့ကို ရုရှား GNU / Linux Distro ခေါ်ဆိုခ «ROSA Desktop»ကပြောသည်လျှောက်လွှာ၏ဖန်တီးသူသော, အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ROSA Image Writer - ISO ပုံရိပ်များကို USB သို့ကူးရေးရန်ရိုးရှင်းသောမန်နေဂျာ
Sandboxie - Windows application ကို Open Source အဖြစ်စတင်ခြင်း
Apple နှင့် Google ပူးပေါင်း၍ COVID-19 ခြေရာခံခြင်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခြင်းဤအရာသည်သီးသန့်တည်ရှိမှုအဆုံးသတ်တော့မည်လော။